Elephone ELe - Box မှ Bluetooth 4.1 ကြိုးမဲ့စပီကာစျေးနှုန်း ...
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုအသံနည်းပညာElephone ele - Box ကို 4.1 Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,41:36 pm တွင်
စျေးနှုန်းသမိုင်း Elephone ele - 4.1 Box ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့ Mini ကိုနာယက
€ 21,67 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
€ 23,77 - 2019 12 အောက်တိုဘာ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 23,77 - 2019 12 အောက်တိုဘာ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 21,67 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
Elephone ele - 4.1 Box ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့ Mini ကိုနာယက
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Elephone ele - Box ကို 4.1 Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
X ကိုက x 9.55 9.55 4.30 စင်တီမီတာ x ကို 3.76 3.76 1.69 လက်မ x ကို
X ကိုက x 8.55 8.55 3.30 စင်တီမီတာ x ကို 3.37 3.37 1.3 လက်မ x ကို
အားပြန်သွင်းနိုင် lithium-ion ဘက်ထရီ
e လီ - လေးထောင့်ကွက်
ဘလူးတုသ်ကို USB port ကိုအတူ 3.5mm Plug, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူဖုန်းများအတွက်, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ Enabled
3.5mm အသံ, မိုက်ခရို USB
ဘလူးတုသ်လက်ကမ်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ, မိုက်ကရိုဖုန်း, အတှဲထိန်းချုပ်ရေး
iPhone, iPod, Laptop ကို, မိုဘိုင်းဖုန်း MP3, MP4, MP5 PC, PSP, တက်ဘလက်ပီစီကွန်ပျူတာ
1 x Elephone ELe - ကြိုးမဲ့စပီကာ
Elephone ele - Box ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ 4.1 ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Elephone ele - Box ကို 4.1 Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
ပေါလုက - 2019 10 ဇွန်
Elephone ele - ကြီးမြတ်အရောင်လက်ရာ, ဘက်ထရီသက်တမ်း - - အလွန်ရှည်လျားသော - မြန်နှုန်း, အသံအရည်အသွေးနှင့်ဘေ့စ, ရော်ဘာအိုးအိမ်, လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆဲလ်များနှင့် ဆက်စပ်. charging - Box ကိုကြိုးမဲ့နာယကအတူတူပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကကြီးမြတ်ဆုကြေးဇူးကိုစပီကာဖွင့်ခြင်းနှင့်သာ !! ! အဆိုပါ Elephone ele နာယက - Box ကိုကြိုးမဲ့နာယကတစ်ဦးစူပါလော်စပီကာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစားအတိုင်းအတာ, ရော်ဘာအိုးအိမ်နှင့်စတိုင်က၎င်း၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ Long ကဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ရှင်းလင်းသောအသံသည်ယင်း၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့စပီကာ - ကအများအပြားဆဲလ်တွေနဲ့အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါလက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်သာပြုလုပ်ရန်အကြံပြု - ထိုသို့သောကောင်းတစ်ဦးဈေးနှုန်းမှာရှိခြင်းထိုက်သည် !!! အဘယ်သူမျှမ minuses
Zoli - 2019 10 ဇွန်
ဂရိတ်အရောင်, ဘက်ထရီသက်တမ်း - အလွန်ရှည်လျားသော - မြန်နှုန်း, အသံအရည်အသွေးနှင့်ဘေ့စ, ရော်ဘာအိုးအိမ်, လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆဲလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအားသွင်း - ကကြီးမြတ်ဆုကြေးဇူးကိုစပီကာဖွင့်ခြင်းနှင့်သာ !!! အဆိုပါ Elephone ele နာယက - Box ကိုကြိုးမဲ့နာယကတစ်ဦးစူပါလော်စပီကာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစားအတိုင်းအတာ, ရော်ဘာအိုးအိမ်နှင့်စတိုင်က၎င်း၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ Long ကဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်ရှင်းလင်းသောအသံသည်ယင်း၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့စပီကာ - ကအများအပြားဆဲလ်တွေနဲ့အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါလက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်သာပြုလုပ်ရန်အကြံပြု - ထိုသို့သောကောင်းတစ်ဦးဈေးနှုန်းမှာရှိခြင်းထိုက်သည် !!! ငါမရှိသေးပါအားနည်းချက်များကိုတွေ့ရှိရကြပြီမဟုတ်။
တစ်ဦးက Bende အဘိဓါန် - 2019 10 ဇွန်
ငါလော်စပီကာနှင့်အတူကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါဟာသူမရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့ပါပဲ။ ကျွန်မအံ့သြသွားမိပါတယ်သောကြောင့်ငါတစ်ဦးထက်ပိုစျေးကြီးပြီးပိုကြီးပီရှိသည်, ကတော်တော်လေးကောင်းသောအသံ။ ဒီနေရာတွင်ကအရွယ်အစားတို့သည်အစဉ်ရေတွက်ခြင်းနှင့်ပင်စျေးပေါနေကြသည်ပုံရသည်။ ဒါဟာအစဦးတည်းဖော်ပြချက်အရသိရသည်ဟာ operating အချိန်သိတယ်။ ဒါဟာအာကာသအတွင်းသေးငယ်တဲ့င်နှငျ့သငျဖုနျး၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောလော်စပီကာမှနားထောင်ဖို့မရှိကြပါဘူး။ သေးငယ်တဲ့လော်စပီကာအဘို့ရှာသောသူတို့၌ငါအကြံပြုဝံ့! ဦးတို့ကသီချင်းနားထောင်အပန်းဖြေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအားနည်းနေပေမယ့်အလွန် ok ဘေ့စ